Izindaba - Graphene Production Method
Indlela Yokukhiqiza yeGraphene
1, indlela yokuhlubula imishini
Indlela yokuhlubula imishini yindlela yokuthola izinto zokwakheka okuncane kwe-graphene ngokusebenzisa ukungqubuzana nokunyakaza okuhlobene phakathi kwezinto ne-graphene. Le ndlela ilula ukuyisebenzisa, futhi i-graphene etholakele igcina isakhiwo se-crystal ephelele. Ngo-2004, ososayensi ababili baseBrithani basebenzisa i-tape esobala ukuqeda ungqimba lwe-graphite yemvelo ngongqimba ukuthola i-graphene, nayo eyayibhekwa njengemishini yokuhlubula imishini. Le ndlela yake yabhekwa njengengasebenzi futhi engakwazi ukukhiqiza ngobuningi.
Eminyakeni yamuva nje, le mboni yenze ucwaningo oluningi nentuthuko ezindleleni zokukhiqiza ze-graphene. Njengamanje, izinkampani eziningana eXiamen, eGuangdong nakwezinye izifundazwe kanye nasemadolobheni sebenqobe umgoqo wokukhiqiza wamanani aphansi wokulungiselela i-graphene, besebenzisa indlela yokuhlubula imishini ukukhiqiza i-graphene ngentengo ephansi nekhwalithi ephezulu.
2. Indlela yeRoxox
Indlela yokwehlisa i-oxidation ukusebenzisa i-graphite yemvelo ngokusebenzisa i-reagents yamakhemikhali njenge-sulfuric acid ne-nitric acid nama-oxidants anjenge-potassium permanganate ne-hydrogen peroxide, ukwandisa isikhala phakathi kwezendlalelo ze-graphite, bese ufaka ama-oxide phakathi kwezingqimba ze-graphite ukulungiselela i-GraphiteOxide. Ngemuva kwalokho, ophendulayo ugezwa ngamanzi, kuthi isiqina esigeziwe somiswe emazingeni okushisa aphansi ukulungiselela i-graphite oxide powder. I-Graphene oxide yalungiswa ngokuxebula i-graphite oxide powder ngokuxebula ngokomzimba nokukhulisa izinga lokushisa eliphezulu. Ekugcineni, i-graphene oxide yehliswe ngendlela yamakhemikhali ukuthola i-graphene (RGO). Le ndlela ilula ukuyisebenzisa, enesivuno esikhulu, kodwa ikhwalithi yomkhiqizo ophansi . Indlela yokwehlisa i-oxidation isebenzisa ama-acid aqinile njenge-sulfuric acid ne-nitric acid, okuyingozi futhi okudinga amanzi amaningi ukuhlanzwa, okuletha ukungcola okukhulu kwemvelo.
IGraphene elungiselelwe indlela ye-redox iqukethe amaqembu asebenzayo aqukethe i-oxygen futhi kulula ukuguqula. Kodwa-ke, lapho kuncishiswa i-graphene oxide, kunzima ukulawula okuqukethwe kwe-oxygen ye-graphene ngemuva kokuncishiswa, futhi i-graphene oxide izokwehliswa ngokuqhubekayo ngaphansi kwethonya lelanga, izinga lokushisa eliphakeme enqoleni nezinye izinto zangaphandle, ngakho-ke ikhwalithi yemikhiqizo ye-graphene eyenziwe ngendlela ye-redox ivame ukungahambelani kusuka ku-batch kuya ku-batch, okwenza kube nzima ukulawula ikhwalithi.
Njengamanje, abantu abaningi badida imiqondo ye-graphite oxide, i-graphene oxide ne-graphene oxide encishisiwe. I-graphite oxide ibunsundu futhi iyi-polymer ye-graphite ne-oxide. I-Graphene oxide ingumkhiqizo otholwe ngokuxebula i-graphite oxide kusendlalelo esisodwa, ungqimba ophindwe kabili noma ungqimba lwe-oligo, futhi iqukethe inani elikhulu lamaqembu aqukethe umoya-mpilo, ngakho-ke i-graphene oxide ayisebenzi futhi inezinto ezisebenzayo, ezizoqhubeka zinciphise futhi kukhishwe amagesi afana nesulfure dioxide ngesikhathi sokusetshenziswa, ikakhulukazi ngenkathi kucutshungulwa izinto ezinokushisa okuphezulu. Umkhiqizo ngemuva kokunciphisa i-graphene oxide ungabizwa ngokuthi i-graphene (i-graphene oxide encishisiwe).
3. (i-silicon carbide) indlela ye-SiC epitaxial
Indlela ye-SiC epitaxial ukwehlisa ama-athomu e-silicon kude nezinto zokwakha futhi wakhe kabusha ama-athomu we-C asele ngokuzihlanganisela kumshini we-ultra-high kanye nemvelo yokushisa okuphezulu, ngaleyo ndlela uthole i-graphene ngokuya nge-SiC substrate. I-graphene esezingeni eliphakeme ingatholakala ngale ndlela, kepha le ndlela idinga imishini ephezulu.
Isikhathi Iposi: Jan-25-2021